Archive du 20180425
Olana ara-politika Mamotika hatrany ny toekarena
Maro ny mpivarotra nanakatona ny tsenany nandritra iny sakoroka nisy teny Analakely iny. Na ireo mpivarotra majinika na ireo manana magazay lehibe dia nandray fanapahan-kevitra ny tsy hivarotra noho ireo toe-java-misy teny an-toerana.
CT sy CST teo aloha “Miala ny filoha Hery Rajaonarimampianina”
Nanao fanambarana ihany koa omaly tetsy amin’ny lapan’ny tanànan’Analakely ireo mpikambana teo anivon’ny andrim-panjakana roa tamin’ny fitondrana tetezamita dia ny antenimieram-pirenena sy ny antenimierandoholona.
Fianarantsoa Mihetsika ny vahoaka
Nisy omaly ny famoriam-bahoaka tao amin'ny kianja Magro Ampasambazaha taorian’ny antso tamin'ny onjam-peo sy taratasy naparitaky ny filoha nasionalin’ny antoko Tambatra Pety Rakotoniaina amin'ny anaran'ny Komitin’ny Fahamarinana,
Malagasy any Frantsa Mitaky ny fialan-dRajaonarimampianina
Tsy hipetra-potsiny ireo teratany Malagasy mila ravinahitra any Frantsa. Mitaky tsy misy hatak`andro ny fialan`ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Manameloka tanteraka ny famonoana sy fandratrana olona izy ireo.
Afaka mody isika a !
Manao ahoana ianao izay ry Jean ? Manaja anao hatrany ary mirary ny soa sy ny tsara indrindra. Isika ry Jean akory tsy sanatria hifandrangitra na hifamendrofendro fa tanindrazana iombonana ity aann!
FJKM Ambondrona Firaisana 1 miliara Ar no ilaina amin’ny fanamboarana ny fiangonana
Vola manodidina ny iray miliara Ar no ilaina amin’ny fanamboarana ho vaovao ny fiangonana FJKM Ambondrona Firaisana, Synodam-paritany Iarivo Avaradrano.
Main’ny afo natsangany
Mazava ny tenin’ny solombavambahoaka fa tsy maintsy hoesoriny amin’ny heriny rehetra ny filoha sy ny fanjakana nandatsa-drà sy nampamono vahoaka. Lasa lavitra izany ny raharaha noho ny didoha sy ny fanamaivanana ny hevitry ny hafa.
Mbola maro amin’ireo mpanara-baovao no velom-panontaniana mikasika ny antony nahatongavan’ny filohan’ny filankevitry ny fampihavanana Malagasy na ny CFM, Maka Alphonse, tany Toamasina ny alatsinainy teo nandritry ny fitokanana ilay fanitarana ny seranan-tsambon’I Toamasina. Miandry ny fampihavanana tena izy anefa ny rehetra.